Olee otú iji gbochie spam na Viber - Nchegbu ndị ọkachamara na mberede
Ị enwetala spam ozi na Viber a ọnwa? Na ohere ị nwere, ọ bụghị naanị gị, dịka ozi ndị a gbara gburugburu.
Ọ bụghị ihe mgbochi kachasị mma n'oge a, ihe ndị a na-enye nsogbu na-agwụ elu. Nke ahụ bụ na ihe kpatara ya bụ ihe dị iche iche na-eme ka ụbọchị dị iche iche dị mma iji mee ihe.
Nke a bụ ụfọdụ okwu bara uru site n'aka Ryan Johnson, onye ọkachamara na-ahụ maka Semalt , nke ga-eduzi gị na ichebe akaụntụ Viber gị site na ozi spam.
Anyị na-anụ ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ngagharị iwe si Viber ahịa na ha na-na-a bukwanu ọtụtụ nke spam na Viber. Ụfọdụ n'ime ozi ndị a bụ enweghị mgbakasị. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime ha dị ize ndụ. Ozi gbasara Phishing na-agbalị ịchọta ozi onye ọ bụla, kwụọ ụgwọ nọmba kaadị, ma ọ bụ ọbụna gbalịa iwebata malware na ngwaọrụ ka a gụgoro ya, ma ọtụtụ ihe gbasara ndị ahịa Viber nwere nrụgide maka ọdịmma nke ngwa ahụ.
Viber na-ewere echiche free ozi n'etiti Viber ahịa ndị nwere ngwa ẹkenam na ha ekwentị. Ebe ọ bụ na ejikọtara ya na otu nọmba telifon, ndị ahịa nwere echiche dị iche iche ma ọ bụ nọmba setịpụrụ ederede, ihe ndekọ ndị ahụ jikọtara na ekwentị. Nke a pụtara na Viber bụ ihe omuma na-enye nkọwa-mana ọ na-eme ka ọ dị oke mkpa maka spammers. N'ụzọ dị otú a, ha na-echegbu iziga spam ka ndị ahịa Viber.
N'ọnọdụ ọ bụla, ị nwere ike igbochi ndị spammers, na Viber na-agbalị ime ka ọ siere ndị spammers iziga gị ozi mkpasu iwe.
Ihe na - eme, gburugburu, bụ nke a: ụfọdụ spammer chọrọ gị ka ị kpatụ njikọ njikọta, ya mere ọ na - eme nchịkọta na ọtụtụ mmadụ nọ n'ime ya.
E zigara mmadụ nile ozi ahụ, spammer na-ahapụ nnọkọ ahụ, a hapụkwara gị usoro ndokwa maka enweghị ụzọ ọ bụla Beam Boycott shades, ma ọ bụ ụzọ isi nweta uru brisk.
Ụfọdụ ndị ahịa ahịa Viber achọpụtala na a na-ezigara ha ozi ọma dị elu. Ozi ndị a adịghị ezite site na Viber, ha enweghịkwa ikike site na nzukọ ahụ. Media mgbasa ozi adịghị ma ọ bụ mgbe ọ ga-ezigara ndị ahịa azụmahịa.
N'ụzọ dị mwute, nke a apụtaghị na ndị ọkachamara na-aghọ aghụghọ adịghị aka ugbu a na-anwa iji usoro ahụ na-ezigara mmadụ n'otu n'otu. Ụfọdụ ebe nrụọrụ na-adịghị agafe agafe amalitela ịnye ozi ezigara ndị ahịa maka ụgwọ, na Viber na-agbalị imechi ndị a.
N'elu ohere na ị na-enweta ozi ị chọrọ, nke a bụ ihe ị kwesịrị ime:
1. Ọ bụrụ na onye na-ezigara gị ozi spam, mepee ma họrọ nhọrọ (na iOS, nke a bụ wiilị dị n'akụkụ aka nri aka nri).
2. Họrọ "Gbasaa kọntaktị a", dị ka gị na onye ahịa ị ga-achọ ịbịaru.
3. I nwekwara ike ịkọsara spammer na Viber site n'ịga na ibe a. Mee ka ịchọta "ọkachamara ọkachamara" ma kpugheere Viber ị na-enweta spam site na onye ahịa. Tụkwasị na nke a, gosi Viber nọmba nọmba spammer, ha ga-emeso ya site n'oge ahụ.
Anyị tụkwasịrị obi na ọdịiche dị n'ọdịnihu nke Viber ga-etinye ikike iji kọọ spam kpọmkwem na ngwa ahụ. Maka ugbu a na-egbochi ndị ikpe ikpe bụ ihe kachasị mma i nwere ike ime Source .